Hababka Iftiinka: Iftiinka maalinlaha iyo calaamadaha leexashada
Midabka Laydhka: drl cad iyo calaamadda leexinta dhalada
Ku habboon: mootooyinka Harley iyo mootooyinka kale ee leh baararka shilalka ee 3.17 cm.
Kuwani bar shil dhajinta nalalka hogaaminaya la imow laba midab oo midabkeedu yahay “LED” oo midabkeedu yahay, mid cad oo nalalka baabuur wadista iyo ambaro u weecinaya astaamaha. Nalalka baararka mootada weyn waxay leeyihiin shaqooyin rogaal celis ah oo nalalka wadista cad ay damiyaan marka ay daaran tahay ishaarada leexashada si loo arko araga ugu badan. Midabada cadcad iyo iftiinka aadka u-fudud waxay mootadaada u keeni karaan muuqaal cusub oo cusbooneysiin ah. Nalalka barafka shilkan mootada waxaa lagu dhejin karaa qaab toosan ama jiifa. Ku habo mootooyinka Guusha Harley iyo kuwa kale oo leh baararka 3.17 cm sida: Ford Raptor f150 09-14 YEAR mootooyinka socdaalka, mootooyinka-dhulka oo dhan, mootooyinka waddooyinka-mootooyinka, mootooyinka waddada ka baxsan, mootooyinka waddada-isboortiga, gawaarida korantada.
Faahfaahinta Naqshadaynta Barta Nalalka Led
Number Model MS-HV125
model Mootooyinka Guusha Harley iyo kuwa kale oo leh baararka 3.17 cm
Power 9LED * 3W Caddaan DRL & 2LED * 1W Calaamadaha Wareejinta
Chips LED Kirii
Midabada Laydhka Caddaan u ah DRL iyo calaamadaha wareejinta
Qalabaynta Cabbirka Baararka 3.17 cm
Sawirrada Nalalka Baarkinka Wadooyinka Baaskiil
Ku habo mootooyinka Harley iyo mootooyin kale oo leh 3.17 cm baararka sida: Ford Raptor f150 09-14 YEAR mootooyinka socdaalka, mootooyinka-dhulka oo dhan, mootooyinka waddada-maraakiibta, mootooyinka waddada ka baxsan, mootooyinka waddada-isboortiga, gawaarida korantada.